Home Wararka Dowladda NN oo Wadda Qorsho ah inay Dalka Dagaal Geliso ama uu...
Dowladda NN oo Wadda Qorsho ah inay Dalka Dagaal Geliso ama uu Jubaland ka Dhaco mid Sokeeye. Akhriso
Waxaa maalamahanba socday daandaansi aan ku haynay dalka Kenya si aan uga dhiganno inaan dalka ka difaaceyno”:cadowga Kenyaanka ah iyo Jabhad ay soo hubeysay oo Marreexaan iyo Ogaadeen u badan”. Runtii waa xaaladihii khatarta ahaa ee dalku ku sugnaa iyo cabsidii dadku qabay oo batrool lagu sii shubayo.
Twitterkaan oo uu soo saaray wasiirka warfaafinta oo ah afhayeenka dowladda Somaliya ee ay Farmajo iyo Rooble hogaamiyaan waxaa ka muuqata mas’uuliyad darro, daandaansi aan caqli ku dhisneyn iyo hurin naceyb u dhaxeeya labada shacbi ee kala dega inta u dhaxeysa degaanaada Gedo ee ku teedsan ilaa gobolka Jubadda Hoose ilaa iyo Mandheera. Wasiirka oo ka soo jeeda Somaliland ayaa u muuqda mid uga sii daraya xaaladda oo abuuraya cabsi kuwajahan inaan Kenya isku dhacno, iyadoo Kenya ay ciidamadeeda ka mid yihiin ciidanka AMISOM ee jooga Somaliya kuna sugan gooba badan oo ka mid ah.
Waxaa kaloo iyana beer xanuun leh muuqaal wiilal Somaliyeed oo qorayaha dabadiisa la dhacaya kuwa kale oo dhulka u jiifa oo ay gacmaha ka xereen. Runtii waa dembi qaran waxa halkaas ka dhacay ee keenay in wiilashaas qoryaha la isugu dhiibay oo la yiri reer hebel iska dhiciya iyagoo labadoodaba wata tuutaha qaranka iyo calaamadda xiddigta ee calanka buluugga ah.
Runtii Madaxweyney Farmajo waa dembiile ay Khasab tahay in maxakamad aadane la soo taago inta uusan tagin maxkamadda rabbi oo la hubo inay dhaceyso loogana jaasin doono wixii uu galay. Farmajo dalkaan waa dumiyey, dadkeeda wuxuu isugu diray si aan la qiyaasi Karin. Wuxuu naga dhigay kuwa cadow isu ah oo caloosha iska neceb waana arrin ay tahay in loo qabsado. Wiilashaneena waxaa uu ka dhigay kuwa calooshood u shaqeystayaal ah oo ku baaba’ay dagaalka sokeeye ee Itoobiya waqooyigeeda ka socda, kuwana waa kuwan dalka gudahiisa Gedo isku laaynaya, waa mustaqbalkii berito oo uu si fudud u laaynayo, shacbkuna ka kici la’ yahay.
Dhinaca kale, waxaan maqallaa dad dhowr ah oo ku doodaya inuu Farmajo dalkaan wax u qabtay, waxaa fiicnaan lahayd in Allihii abuuray ay uga cabsadaan waxay sheegayaan oo aysan ka cabirin xoogaa xaq darro ah oo loo sed buriyey iyaga sida kooxo afmiishaar ah oo nuc kasta leh, siyaasiyiin, duubab ku sheeg, wadaad xumayaal, iyo haween loo been sheegay oo dhaqaale aysan shaqeynsan loo qoray, kadibna ku leh waxbuu qabtay.
Farmajo dalkaan waa la haray dhinac kasta dhaqaale ahaan, ammaan ahaan, diin ahaan, Sharaf ahaan iyo diplomasiya ahaan oo wuxuu nooga tagin doona ayaa ka xanuun baday waxa uu nagu falay. Daawo muuqaalka hoose oo waxaa Gedo isku dilaya laba ilma adeer ah oo uu qoryaha isugu dhiibay, Xamarna waa sidaas u fiirso koxda dhuuniqaatayaasha ee difaaceyss Farmajo iyo kooxda leh war na dhibtaye na dhaaf waxay u badan yihiiin kuwa hal qabiil ah , haddii xaalku af ka gudbana wiilasha qoryaha isu qaadanayaa waxay noqonayaan halkaan reer oo ay Farmajo iyo Fahad ay isku hubeynayaan, iyadoo RW Rooble uu u dhaqmayo sidii cunug yar oo dhar ciideed loo iibiyey oo cidba mar soo salaamaya caruur yaryarna Xambaaraya isagoon xataa la ogoeyn inuu sido cudurada la kala qaado faafa.
Bal qof walbow akhri waxa uu qoray willkan Wasiirka sheeganaya oo muuqaalkan daawo oo qalbigaa la showr kadibna waxa aad dareemeyso bal eeg inaad sidaan ku sii jiri kartid iyo in kale.